गाम्बियाई अभिनेत्री राजकुमारी शिy्गल गर्लफ्रेंड खोज्दै! - टेली रिले
गाम्बियाई अभिनेत्री राजकुमारी शिy्गल गर्लफ्रेंड खोज्दै!
पक्कै पनि यो हामी छक्क पर्न कहिल्यै रोक्ने छैन। गाम्बियाली अभिनेत्री राजकुमारी शिng्गलले पुरुषको साथ धेरै निराशा झेल्नु भएपछि उनको यौन प्राथमिकतालाई समलि .्गी बन्न परिवर्तन गरिन्। उनीका अनुसार उनी पुरुषहरूसँग बाहिर जान थाकिसकेकी छिन् र अब उदार वक्रको साथ सुन्दर "गजल" किन्न चाहान्छिन्।
उनको भविष्य गाम्बियाको राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार पछि, राजकुमारी शिng्गलले फेरि भर्चुअल विश्वलाई हल्लायो। उनले आफ्नो यौन प्राथमिकता परिवर्तन गरिरहेकी छिन् भनेर उनले आफ्नो संसारलाई छक्क पार्नुभयो। उनीसँग अब महिलाहरूको लागि कलमे छ। उनी अब समलि .्गी छिन्।
उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा अनुप्रयोगहरूको लागि कल सुरू गर्यो। तर, कुनै पनि महिला जसले राजकुमारी शिy्गललाई डेट गर्न चाहान्छिन् उनि भन्दा सुन्दर र सेक्सी हुनु पर्छ। उनले यो पनि संकेत गर्‍यो कि उनको नयाँ पार्टनरमा उनी जस्तै ठूलो बटन हुनुपर्दछ र आश्वासन दिनुहुन्छ कि उनले पछिबाट राम्रो देखभाल गर्नेछन्।
« मलाई महिलाको लागि राम्रो स्वाद छ ओह ... तपाईं मसँग हुनको लागि म भन्दा तपाईं पातलो र सेक्सी हुनु पर्छ ... तपाईंको अनुप्रयोग महिलाहरू सबमिट गर्नुहोस्… कुनै पुरुषलाई अनुमति छैन। म तपाईंहरू सबैबाट थकित छु ... मेरो अर्को gf तातो हुनु पर्छ ओह ठूलो बटनको साथ म उसलाई हेरचाह गर्नेछु र लुट्छु उनले भने।
यद्यपि राजकुमारी श्याle्गलका धेरै फ्यानहरू सोशल मीडियामा यस्तो कुरा सुनेर छक्क परेका छन्। अझै पनी उहाँको सन्देश व्यंग्यात्मक वा गम्भीर थियो भने आश्चर्य गर्छन्। जे भए पनि, मानिससँग उसको विगतका सम्बन्धहरू उसको अपेक्षाहरू अनुरूप थिएन।
यो लेख पहिलो पल्ट देखा पर्यो http://www.culturebene.com/61851-lactrice-gambienne-princesse-shyngle-a-la-recherche-dune-petite-amie.html
जोसेफ एन्टोइन-बेल, Seidou Mbombo Njoya, Rigobert Song ले स्टीफन टाटावलाई श्रद्धांजलि
Je Wanda & Co र NAJA International Productions समूहले अभूतपूर्व अडियोभिजुअल सह-उत्पादन साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्दछ